Sekolin'ny asa vokarina ho an'ny fiara an-trano | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara16 BursaSekoly an-tariby tonga ho an'ny fiara an-trano
05 / 01 / 2020 16 Bursa, ANKAPOBENY, Highway, Headline, Faritra Marmara, fiara, TORKIA
tonga any an-tsekoly fianarana ho an'ny fiara an-trano
Sampana avo lenta momba ny fiarakodia ara-teknika ara-teknika sy teknolojia Anatolian Araç, dia misokatra eo amin'ny sehatry ny teknolojia fiaran-dalamby i Alan. Bursa Automotive Industry Exporters Association Vocational and Technical Anatolian High School amin'ny herintaona manomboka ny fiofanana.
Torkia Namoaka ny voalohany fiara an-trano ho an'izao tontolo izao. Na dia eo am-panatanterahana ny fanomanana ny orinasa any Bursa aza, ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena dia nanao hetsika hanofana ireo mpiasa mahay handray anjara amin'ny famokarana fiara elektrika tanteraka.
Amin'ity tetik'asa ity, izay ho tanteraka miaraka amin'ny famokarana an-trano sy nasionaly, ny sampana fiara fiarakodia herinaratra aç »dia hosokafana voalohany amin'ny sehatry ny teknolojia fiaran-dalamby ao amin'ny Fikambanana Vocational sy teknikan'ny fanatanjahantena Anatolianan'ny fanatanjahantena varotra eto Bursa, izay hanokafana ny orinasa mba hampiofanana ireo mpiasa ara-teknika ilaina. Ny fiofanana momba ny mpampianatra dia hotanterahina mifanaraka amin'ny fandaharam-pianarana izay haorina ao anatin'ny fotoana fohy ary ekena ny fiatrehana izany sehatra izany amin'ny taona akademika manaraka ireo mpianatra.
Bursa Automotive Industry Exporters Association Vocational and Technical Hybrid fiara, fiara mandeha amin'ny herinaratra, fiara mandeha hidrôma, teknôlôjia bateria, moto elektrika, sensor, fanodinana sary, teknolojia nitarika, CCTV (Rafitra mivalona nakatona sarona), rafitra rafitra mekanika. , haitao teknolojia fitaterana, teknolojia elektrolisis.
Ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Ziya Selçuk, izay nanome vaovao tsara ny fanampiana ara-teknika ho an'ny fiara eo an-toerana, nilaza hoe: imiz Mizara ny fientanentan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny fiaraha-monina iray manontolo izahay. ” Torkia dia miteraka fiara izay nanomboka ny fanofanana amin'ny asa mahay miasa expeditiously mba hanambara Selçuk Minisitry nanohy:
Olarak Amin'ny ministera dia raisinay an-tànana ny filàn'ny firenentsika eo am-pamitana ny fanabeazana ara-teknika sy ara-teknika. Amin'izany toe-javatra izany dia nahavita tetikasa vaovao maro izahay tamin'ny taon-dasa.
Ohatra, nametraka ny ASELSAN Vocational sy Technical Anatolian High School izahay miaraka amina antoka amin'ny asa any Ankara mba ahafahana mameno ny filàna teknika ilaina amin'ny sehatry ny fiarovan-tena ary dia nahazo mpianatra 1% an'ny fampianarana ara-teknika sy ara-teknika izahay. Toy izany koa, voalohany indrindra tao anatin'ny 150 taona, Bursa Tophane Vocational sy Technical Anatolian High School dia nanomboka nanome fiofanana azo antoka amin'ny asa amin'ny sehatry ny mikromosika izay ampiasaina amin'ny sehatry ny orinasa maro, toy ny indostrian'ny fiara, indostrialy, biotekolojia, aerospace ary fiambenana fiasa ary fototry ny haitao mandroso.
Ao Kırıkkale, manangana sekoly ambony sy teknolojia Anatolian vaovao izahay ho an'ny indostrian'ny fiarovan-tena miaraka amin'ny Institution Mekanika sy Chemical Chemical (MKEK). Sambany dia hanokatra sampana fiara mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny lozisialy ara-tsosialy fiara izahay mba hanofana mpiasa ara-teknika izay ilaina ao Bursa izay hivoahan'ny tetikasa fiara an-trano. Noho io tanjona io dia nifidy ny Sekoly ambaratonga ambony ara-teknika sy ara-teknikan'ny fanabeazana indostrian'ny Bursa otomotifika i Bursa automotive.
Teo ambany fandrindran'ny Minisitry ny Minisitra Mahmut Özer, ny tale jeneraly momba ny fanabeazana ara-teknika sy fampianarana ara-teknika no nanomboka ny asany. Izahay dia handray ireo mpianatra voalohany ato amin'ity sehatra ity amin'ny taom-pianarana manaraka. ”
Fikambanana mpanondrana indostrian'ny Bursa automatique
Bursa Tophane Sekoly ambony ara-teknika sy ara-teknika ao Anatolian
fiara mitondra hibrid
fiara mandeha hidradrano